Nzira Dzakanakisa dzeKuchenesa Bath Chairs uye Bath Cushion
Kana iwe uine mashoma ekufamba, macushion ekugezera uye macheya ekugezera anova zvishandiso zvinobatsira. Izvo zvakagadzirwa kubva kune yakasimba, yakasimba uye inogara kwenguva refu zvinhu. Kunyange zvakadaro, kumwe kugadzirisa kunodiwa. Kunyangwe zvingasadonha kana zvikasachengetwa, zvinogona kutanga kukura zvinokuvadza mold, mabhakitiriya uye fungus zvinogona kukonzera kutapukira kweganda.
Iwo matipi ari pazasi anobatsira kuchengetedza ako ekugezera mabatsiro.
Chenesa zuva nezuva: Kuchenesa bhatiro rako rekushambidza kana chigaro zuva rega rega kunoderedza kukuvadza kwekuwanda kwevhu uye hutsinye. Kuzvichenesa zvichave nyore kwazvo kana iwe ukaona iyo tsvina.
Paunenge wapedza kugeza, shandisa jira rakaoma kana tauro kupukuta pasi pamutsago kana cheya. Izvo zvakakosha kuti upinde mumajoini nezvimwe zvivakwa. Usati waaisa mukuchengetedza, rega iwo mweya uzere. Kana iwe uine inflatable cushion, chengeta iyo mweya kusvikira yanyatso kuoma.
Bvisa zvinobatsira zvekugezera kubva mushower kana mubathroom zvachose sezvo iwo mwando mamiriro anowedzera kukura kwehutachiona uye chakuvhuvhu.
Kunowirirana pamwedzi kuchenesa: Kunyangwe iwe ukachengeta yako yekugeza yekuita zvezuva nezuva, zvishandiso zvako zvekugezesa zvicharamba zvichitora zvakasviba uye kuumbika nenguva, nekudaro kuchenesa kwakanyanya kunodiwa.
Kuchenesa Chigaro cheBhati - Mabhachi echigaro anovharika anogona kucheneswa mumuchina wekuwachisa. Shandisa ammonia uye mhinduro yemvura kuibvisa pakutanga kana iwe ukaona zviratidzo zveforoma kana fungus. Chenesa simbi nemapurasitiki zvikamu nesipo nemvura. Dzivisa makemikari akaomarara sezvo achikwanisa kunetesa adhesives anoshandiswa kubatanidza dzimwe simbi nemapurasitiki zvikamu pamwechete.
Paunenge uchinge washambidza uye nekupukuta zvikamu zvacho, zvimwaya nemushonga unorwisa mabhakitiriya. Bhurasho nyoro rinogona kushandiswa kuchenesa zvakaoma kusvika panzvimbo. Usashandise mabristles akaomarara kana kukwesha zvakanyanya sezvo zvaigona kusiya mavanga madiki pane iyo nzvimbo, iyo inopa nzvimbo yekuberekera hutachiona.
Kuchenesa Bhati Cushion - Izvi zvinogona kushambidzwa nemaoko muammonia uye mhinduro yemvura uye / kana mvura uye sipo. Mushure mekuchenesa, chiwedzere uye chiite kuti iome. Kuti ukurumidze kuomesa, unogona kuipukuta nejira.
Ita shuwa kuti zvinoyamura zvekugezesa zvanyatso kuoma kare kushandisa ivo nguva inotevera. Kana isina kuoma zvakakwana, hunyoro nzvimbo dzinogona kukonzera kukura kwebhakitiriya uye chakuvhuvhu.